गुगल पाण्डाबाट रिकभर गर्दै Martech Zone
गुगल पांडाबाट पुन: प्राप्ति
शनिबार, अप्रिल 23, 2011 शनिबार, अक्टोबर 29, 2011 Douglas Karr
म जान्दछु कि मुठ्ठी कम्पनीहरूले एल्गोरिथ्मको नाममा चोट पुर्‍याए पान्डा। पांडा केन्द्रित थियो र लक्षितको उद्देश्य थियो सामग्री खेती तर छ धेरै व्यवसाय प्रभावित। मेरो एक साथीले एक पेशेवर निर्देशिका सेवा मा रैंकिंग मा एक दशक को लागी रैंकिंग नेतृत्व कि आफ्नो रैंकिंग मा गुमाएको कारण आफ्नो पहिलो कर्मचारी छान्नु थियो। आज, हामीले हाम्रो एक मनपर्ने ग्राहकसँग सम्बन्ध रोक्‍यौं। विज्ञापन राजस्वमा उनीहरूको ठूलो नोक्सानीको सामना गर्नुपर्‍यो (हामी अझै पनि उनीहरूलाई समर्थन गर्नेछौं किनकी मलाई उनीहरूको ट्राफिक फर्कने कुरामा कुनै श .्का छैन)।
मैले आज क्लाइन्टसँग भेटें र कोठा उल्लेखनीय थियो। तिनीहरू राजस्व वृद्धि गर्न जारी राख्न धेरै दबाब अन्तर्गत छन्, त्यसैले यस प्रकारको झण्डा ठूलो छ। भाग्यवस, उनीहरूको उत्पादन पर्याप्त रमाईलो छ, त्यसैले मैले सिफारिस गरें उनीहरूले कडाईका साथ हेराई गरे gamification तिनीहरूका क्रूर प्रशंसकहरू लिन र एक वातावरण सिर्जना गर्न जहाँ तिनीहरू निरन्तर पुरस्कृत हुन्छन् र उनीहरूले प्रदान गरेको सेवाको उपयोगको लागि मान्यता प्राप्त छन्।
खोज इञ्जिन अनुकूलन पक्षमा, कुराकानी थोरै कठिन थियो। जब गुगलले सामग्री फार्महरू मनपरायो, हामीले क्षैतिज रूपमा सामग्री प्रकाशित गर्न पूर्वाधारहरूलाई धक्का दियो। तिनीहरूको शस्त्रागारमा एक विशिष्ट शीर्षक यस अन्तर्गत २२,००० पृष्ठहरू हुन सक्दछ - र हामीले ती सबै धकेल्‍यौं। साइट अत्यन्त ठूलो थियो, तर उचित रूपमा गुगलको फाइदा उठाइयो - स्काय्रोकेटिंग ट्राफिक र राजस्व।
पांडा भन्दा पहिले (गुगल अझै ट्वीक गर्न जारी छ), नयाँ सामग्री प्रकाशित गर्न सजिलो थियो र त्यो सामग्रीको रैंक राम्रोसँग थियो। यस्तो देखिन्थ्यो कि केही सर्तहरूमा राम्रो श्रेणीकरणले तपाईंको सामग्री प्रकाशित गर्न र पछिल्लो कुञ्जी शव्दहरूमा वर्गीकृत गर्ने क्षमतालाई प्रभाव पारेको छ - जे भए पनि तिनीहरू प्रासंगिक थिएनन्। आब नाई।
पाण्डा पछि, एल्गोरिदम उल्टोमा राखियो। कुनै पनि पृष्ठहरू जुन साइटमा अवस्थित छन् जुन ट्राफिक रैंक वा ड्राइभ थिएन वास्तवमा ठूलो वजन भयो जुन सम्पूर्ण साइटलाई तान्दै। Months महिनाको लागि सिधा हामीले साइट ड्रप गर्न जारी रहेको देख्यौं - र्याँकिंगमा मात्र होईन, तर द्रुत रूपमा कुञ्जीशब्दहरूमा जुन सब भन्दा खोज खण्डहरू प्रदान गर्दछ। राम्रो छैन।
त्यसोभए कम्पनीहरू के गर्छन् गुगल पांडा एल्गोरिथ्मले चोट पुर्‍यायो अब के गर्ने?
दुब्ला पानाबाट छुटकारा पाउनुहोस्। थोरै मूल्यको साथ कमजोर पृष्ठहरू, नराम्रो सामग्री, कम प्रभाव र कम दरिलो तपाईंको साइटमा उत्कृष्ट पृष्ठहरू तान्दै छन्। अब तिनीहरूबाट छुटकारा पाउनुहोस्।
यदि तपाईंसँग एक तेर्सो सामग्री फार्म छ ... मतलब तपाईंको गृह पृष्ठ र तपाईंको साइटमा सबैभन्दा कम पृष्ठको बीच नेभिगेट गर्ने धेरै चरणहरू छैन ... तपाईंको पदानुक्रम पुनर्विचार गर्नुहोस्। तपाईको उत्कृष्ट सामग्रीलाई लामो-पुच्छ शीर्षकमा विस्तृत रूपमा प्रकाशित गर्नुको सट्टा ... जानकारीको साना साइलोमा यसलाई संकुचन गर्नुहोस्। उदाहरण: यदि मँ मार्केटिंग मा एक साइट छ र लामो पूंछ गूगल मा रैंकिंग कसरी गरीन्छ ... गुगल मा कसरी रँक गर्ने को लागी एक पृष्ठ को सट्टा, म शायद मार्केटिंग र गुगल मा एक सामयिक पृष्ठ हुनु पर्छ कि अधिक को मिलाउँछ। एक बुद्धिमान उपसमूहमा सामग्री।
तपाईंसँग भएको उत्कृष्ट पृष्ठहरू र राम्रो क्रमलाई बढावा दिन जारी राख्नुहोस्। खराब प्रदर्शन गर्ने पृष्ठहरूको भार सामना गर्न तपाईंले आफ्नो साइट भित्र पृष्ठहरू प्रमोट गर्न जारी राख्नु पर्छ जुन राम्रो गरिरहेछ - केवल तिनीहरूको स्तर निर्धारण गर्न।
एसईओको अन्य सबै पक्षहरू निर्दोष रूपमा कार्यान्वयन गर्नुहोस् - रोबोट.टक्सट, साइटमैप्स.एक्सएमएल, पिंगि,, पृष्ठ निर्माण, इत्यादि सहित। तपाईंको सामग्री फार्मको साथ त्रुटि वा ढिलाइको लागि अब कुनै सीमा छैन। बहाना बनाउन रोक्नुहोस् र तपाईंको साइट फिक्स गर्नुहोस्। यसको गुणस्तर, प्रतिनिधित्व, गति ... निश्चित गर्नुहोस्।
सामग्री फार्महरू खराब चीज होइनन् (गुगलले अझै विकिपेडिया मनपराउँछ)। एक साइट चलाउने जसले खोज इञ्जिनको फाइदा लिन्छ र धेरै धेरै प्रस्तुत गर्दछ, प्रासंगिक सामग्री खराब चीज होइन। उपभोक्ताहरूले राम्रो सामग्रीको सराहना गर्छन् (पान्डाले यसलाई बेवास्ता गरे पनि)। पाण्डादेखि सामग्री फार्म चलाउन गाह्रो भयो, यद्यपि अब तपाईले उत्पादन गरिरहेका कोटेन्टको खण्ड तपाईले के प्राप्त गर्न खोज्नु भएको छ भन्ने कुरालाई बढी नकारात्मक मान्यताका साथ भेटिन्छ।
प्रवर्धन र पदोन्नतिको लागि सामाजिक मिडिया सूचीबद्ध, साथै ईमेल, पोषण र gamifications जस्तै अन्य प्रयोगकर्ता संलग्नता रणनीति कार्यान्वयन, आगन्तुकहरूको एक ठूलो मात्रा लिन र तिनीहरूलाई दोहोर्याउने आगन्तुकमा परिणत गरेर तपाईंको खाली ठाउँ बनाउन सक्छ।
कीवर्ड रैंक वितरण निगरानी गर्दै?
अप्रिल 23, 2011 मा 10: 14 PM
त्यसोभए यो सबै मात्रामा गुणस्तरीय हुन्छ।
अप्रिल 23, 2011 मा 10: 42 PM
यो पक्कै पनि सन्तुलन हो, अतुल। एउटा उत्तम पोष्टले केहि चीजहरू बेच्न सक्दछ ... तर सयौं उत्कृष्ट पोष्टहरूले अधिक बेच्नेछ। धेरै मनमोहक सामग्री शाउ Sh्ग गर्न ती साइटहरूलाई सँधै लेराउँदछ - तर मलाई शंका छ यो वास्तवमै नगदमा परिणत भएको छ।
अप्रिल 29, 2011 मा 3: 54 PM
तपाईंले यो पनि याद गर्नुपर्दछ कि गुगलले अब साइटहरूलाई पुरस्कृत गर्दैछ जुन स्टिकिनेस फ्याक्टरमा उच्च स्थानमा छ, त्यसकारण गेमिंग साइटहरूले अब ठूलो तरीकाले फाइदा लिइरहेका छन्।
जुलाई,, २०१ at 4::2011। बिहान
यो एक उत्कृष्ट लेख थियो। मेरो साइट होस्टिंगपोस्ट.कमान एक विशाल विशाल फोरम हो तर निकै कडा हिट भयो,% ०% ड्रप र अझै छोड्दै ... म अझै बहस गर्दै छु यदि म पूर्ण रूपमा केहि अरू प्रयास गर्न चाहान्छु भने। धन्यबाद
बाउन्स रेटले पाठकको गतिविधिहरु मापन गर्दछ
तपाईको ब्लगमा त्यो हो, कुन खास पोष्ट तिनीहरू पढ्दा
तपाईंको होमपेजमा अवतरण भयो। यदि मान्छे तपाइँको मा अधिक गुणवत्ता समय खर्च गर्न सक्छन्
ब्लग, यो गुगलको आँखामा वास्तवमै राम्रो छ।
पछिल्लो समय मैले Google बाोल्टिक्स प्रयोग गरेर मेरो बाउन्स रेट जाँच गरें
% 56%। आधारभूत स्तरमा, यो उत्साहजनक छ तर मसँग अझै धेरै छ
प्रतिशत कम गर्न काम गर्नुहोस्।
कम बाउन्स दरहरू तपाईंको ब्लगको लागि उत्तम छ। यदि तपाईंको बाउन्स
दरहरू --० - १००% भित्र पर्ने हुन्छ, तपाईं उत्तम सामग्री लेख्न सुरू गर्नुहुन्छ
यसले पाठकहरूलाई धेरै विशेष तरीकाले सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। प्रासंगिक पोष्ट सिफारिश गर्नुहोस्
र टिप्पणीहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुहोस्।
जुलाई,, २०१ at 6::2012। बिहान
उत्कृष्ट लेख, म अनुमानित पाण्डाको साथ, Google ले कुनै एसईओलाई हटाउन कोशिस गरिरहेको छ जसले एडवर्ड्स प्रयोग नगरी राम्रो रँकिंग प्राप्त गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। मलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्छ कि उनीहरूले यसलाई अलि टाढासम्म लगे, मलाई लाग्छ कि उनीहरूले इन्टरनेटमा मानिसबाट टाढाको प्रत्येक पैसा पेस गर्न प्रयास गरिरहेका छन्। तिनीहरू यो सब मौकाको लागि बनाउन चाहन्छन्।
सबै इमानदारीतामा, तपाईंको साइटमा हेरे पछि, मलाई लाग्छ म ज्ञात सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयन गर्न र तपाईंको सामग्री आयात गर्न कार्य गर्दछु। मलाई लाग्दछ कि तपाईं पृष्ठमा यति धेरै लिंकहरूको कारण कष्ट भोग्न सक्नुहुन्छ।